Nbudata PWDT Zlin Z-142 FSX & P3D - Rikoooo
Ọmarịcha ngwaahịa dị mma nke a na-enye Pannon Nku Design Team, awo ntoatoaso no FSX na P3D v4 +. -Agụnye nkọwapụta akpamkpa zuru oke, ụda sitere na ezigbo Zlin, ụdị ụgbọ elu na-enyocha nnwale nke ezigbo ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na ndị nkuzi. Ọzọkwa, ọ gụnyere ọdịnala omenala na 3D. Ihe ngosi nke mpụga nwere polygons 85,129. Ihe ngwugwu a nwere atụmatụ ihe osise 9.
The Zlín Z 42 bụ otu-engine abụọ oche-Czechoslovakian ọzụzụ ugbo elu arụpụtara site Moravan Otrokovice. A mepụtara version, ndị Z 142, bụ ndị kasị ewu ewu ugbo elu variant na emeputa ugbo elu akara.
Onye edemede: Pannon Wings Design Team